Dhageyso+Akhriso Imisa Weerar Ayey Mujaahidiinta Dhaalibaan Fuliyeen Bishii Lasoo Dhaafay?. – Bogga Calamada.com
Dhageyso+Akhriso Imisa Weerar Ayey Mujaahidiinta Dhaalibaan Fuliyeen Bishii Lasoo Dhaafay?.
Warbixin qoraal ah oo ay soo saartay Imaarada Islaamiga Afghanistan ayna baahisay Warbaahinta Imaarada ayaa lagu soo bandhigay Holwgaladii Bishii lasoo dhaafay ay fuliyeen ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan iyo khasaaraha Nafeet iyo midka hantiyadeed ee ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul lagu gaarsiiyay howlgaladaasi.
Qoraalka ayaa lagu xusay in Soddonkii Maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta ay fuliyeen howlgalo gaaraya(853) Sideed Boqol Konton iyo Saddex weerar kuwaasi oo Lix ka mid ah ay ahaayeen Camaliyaat Istish-haadiyo ah.
Dhanka Saliibiyiinta Mareykanka waxaa weeraradaasi looga dilay (39) Soddon iyo Sagaal isugu jirta Saraakiil iyo askar American ah,waxaana looga dhaawacay(18)Sideed iyo Toban askari oo American ah.
Dhanka maamulka daba dhilifka Kaabul waxaa howlgaladii bishii lasoo dhaafay looga dilay(1885) Kun Sideed Boqol Sideetan Iyo Shan isugu jirta saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka daba dhilifka Kaabul.
Sidoo kale howlgaladaasi waxaa maamulka Ridada Kaabul looga dhaawacay(1257) Kun Labo Boqol Konton Iyo Todobo isugu jirta saraakiil iyo askarta maamulkaasi daba dhilifka ah.
Dhanka Gaadiidka waxey ciidamada Mujaahidiinta Howlgaladaasi ku gubeen(354) Saddex Boqol Konton iyo Afar noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka ah kuwaasi oo isugu jira gaadiid ay lahaayeen ciidamada Saliibiiyiinta Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka Kaabul.
Dhanka Ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalka Afghanistan waxaa howlgaladaasi looga soo riday Labo Diyaaradood oo kala ah noocyada Basaaska Duuliye la’aanta ah iyo noocyada Elecobtarka ah.
Tirikoobkan cusub ee ay soo saartay Imaarada Islaamiga Afghnistan ayaa kusoo aadaya xilli dhawaan dowlada Saliibiyadda Mareykanka ay shaacisay in Tirada ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay aad usii korotay islamarkaana gaartay(60,000) Lixdan Kun oo askari oo Mujaahidiin ah.
Halkan Ka Dhageyso Warbixinta Tirakoobka.